ကင်းမျှော်စင် | သြဂုတ် ၂၀၀၈
ဖတ်လို ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) မြန်မာ ရိုမေးနီးယား ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်္ဂလိပ်
“ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော အကျွန်ုပ်တို့အဘ၊ ကိုယ်တော်၏နာမတော်အား ရိုသေလေးမြတ်ခြင်းရှိပါစေသော။ နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ပါစေသော။ အလိုတော်သည် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ပြည့်စုံသကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်မှာ ပြည့်စုံပါစေသော။” —မဿဲ ၆:၉၊ ၁၀။
သခင့်ဆုတောင်းချက်ဟု လူသိများသော ထိုဆုတောင်းချက်သည် လူသားတို့ကို မျှော်လင့်ချက်ပေး၏။ မည်သို့အားဖြင့်နည်း။
ထိုဆုတောင်းချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း ဘုရားသခင့်အလိုတော်သည် ယခု ကောင်းကင်၌ပြည့်စုံနေသကဲ့သို့ မြေကြီးပေါ်၌လည်း ပြည့်စုံလာရန် ကိုယ်တော့်နိုင်ငံတော်က စွမ်းဆောင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဘုရားသခင်၏အလိုတော်မှာ ကမ္ဘာတစ်ခွင်လုံး လှပသောဥယျာဉ်ဖြစ်သည့် ပရဒိသုအသွင်ပြန်ဖြစ်လာရန်ဖြစ်၏။ (ဗျာ. ၂၁:၁-၅) ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကား အဘယ်နည်း၊ ယင်းသည် ကမ္ဘာကို မည်သို့ ပရဒိသုပြန်ဖြစ်စေမည်နည်း။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည် အမှန်တကယ်တည်ရှိသော အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်၏။ မည်သည့်အစိုးရအဖွဲ့မဆို တည်ရှိနိုင်ရန် ဘုရင်များ၊ ပညတ်ဥပဒေများနှင့် အုပ်ချုပ်ခံပြည်သားများ လိုအပ်သည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည် ထိုလိုအပ်ချက်များကို ပြည့်မီပါသလော။ အောက်ပါမေးခွန်းသုံးခုနှင့်ပတ်သက်၍ သမ္မာကျမ်းစာ၏အဖြေကို သတိပြုကြည့်ပါ–
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင် ဘုရင်များကား မည်သူများနည်း။ (ဟေရှာယ ၃၃:၂၂) ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည် ထိုနိုင်ငံတော်ကို ဦးစီးကြီးကြပ်ရန် မိမိ၏သားတော် ယေရှုခရစ်ကို ခန့်အပ်ထားသည်။ (မဿဲ ၂၈:၁၈) ယေဟောဝါ၏လမ်းညွှန်မှုအောက်တွင် ယေရှုသည် မိမိနှင့်အတူ ဘုရင်များအဖြစ် ‘မြေကြီးကိုစိုးစံ’ မည့်သူတို့ကို “အသီးအသီးဘာသာစကားကိုပြောသော လူအမျိုးအနွယ်ခပ်သိမ်းတို့အထဲမှ” ရွေးနုတ်တော်မူ၏။—ဗျာ. ၅:၉၊ ၁၀။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင် အုပ်ချုပ်ခံပြည်သားများ လိုက်နာရန် အဘယ်ပညတ်ဥပဒေများ ပြဋ္ဌာန်းထားသနည်း။ ပညတ်အချို့သည် အုပ်ချုပ်ခံပြည်သားများ သတ်သတ်မှတ်မှတ်လုပ်ဆောင်ရမည့်အရာများကို တောင်းဆိုထားသည်။ ယင်းတို့မှ အရေးကြီးဆုံးအရာကို ယေရှုဤသို့ဖော်ပြ၏– ‘ “သင်၏ဘုရားသခင်ကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့၊ ဉာဏ်ရှိသမျှနှင့်ချစ်လော့” ဟူသောပညတ်သည် ပထမပညတ်ဖြစ်၏။ ကြီးမြတ်သောပညတ်လည်းဖြစ်၏။ ထိုမှတစ်ပါး “ကိုယ်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသူကို ကိုယ်နှင့်အမျှချစ်လော့” ဟူသော ဒုတိယပညတ်သည် ပထမပညတ်နှင့် သဘောတူ၏။’—မဿဲ ၂၂:၃၇-၃၉။
အခြားပညတ်များကမူ အကျင့်အကြံအချို့ကိုရှောင်ရန် တောင်းဆို၏။ ဥပမာ၊ ကျမ်းစာတွင် ဤသို့ရှင်းလင်းစွာဆိုထား၏– ‘အလွဲမယူကြနှင့်။ မတရားသောမေထုန်၌မှီဝဲသောသူ၊ ရုပ်[ပုံ]ကိုကိုးကွယ်သောသူ၊ သူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူ၊ ယောက်ျားချင်းမေထုန်ကိုပြုသောသူ၊ ထိုအမှုကိုခံသောသူ၊ သူ့ဥစ္စာကိုခိုးသောသူ၊ လိုဘလွန်ကျူးသောသူ၊ သေရည်သေရက်နှင့်ယစ်မူးသောသူ၊ ဆဲရေးကဲ့ရဲ့သောသူ၊ အနိုင်အထက်လုယူသောသူတို့သည် ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်ကို အမွေမခံရကြ။’—၁ ကောရိန္သု ၆:၉၊ ၁၀။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ခံပြည်သားများကား မည်သူများနည်း။ ယေရှုသည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ခံပြည်သားများကို သိုးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့၏။ “သူတို့သည်လည်း ငါ့စကားသံကိုနားထောင်သဖြင့် သိုးခြံတစ်ခု၊ သိုးထိန်းတစ်ပါးတည်းရှိရလိမ့်မည်” ဟုကိုယ်တော်မိန့်ဆိုသည်။ (ယောဟန် ၁၀:၁၆) လူတစ်ဦးသည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင် အုပ်ချုပ်ခံပြည်သားတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ရန် ကောင်းမွန်သောသိုးထိန်းယေရှု၏နောက်သို့ လိုက်နေသည်ဟု ဆိုရုံသာမပြုရဘဲ ကိုယ်တော်မိန့်မှာထားရာများကို ပြုကျင့်သူဖြစ်ရမည်။ “‘သခင်၊ သခင်’ ဟု ငါ့ကိုလျှောက်သောသူတိုင်း ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်။ ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသော ငါ့ခမည်းတော်၏အလိုကို ဆောင်သောသူသာလျှင် ဝင်ရလိမ့်မည်” ဟု ယေရှုဆိုခဲ့သည်။—မဿဲ ၇:၂၁။
ထို့ကြောင့် ယေရှုနည်းတူ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ အုပ်ချုပ်ခံပြည်သားများသည် ယေဟောဝါဟူသော ဘုရားသခင့်နာမတော်ကို အသုံးပြုကာ ဂုဏ်တင်ကြသည်။ (ယောဟန် ၁၇:၂၆) ဘုရားသခင့် “နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကို” အခြားသူများအား သွန်သင်ပေးပါဟူသော ယေရှု၏မိန့်မှာချက်ကို သူတို့နာခံကြသည်။ (မဿဲ ၂၄:၁၄; ၂၈:၁၉၊ ၂၀) ထို့ပြင် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး စစ်မှန်သောမေတ္တာရှိကြောင်းလည်း တင်ပြကြသည်။—ယောဟန် ၁၃:၃၅။
ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပြောင်းအလဲကြီးများကို မကြာမီဖြစ်ပေါ်စေတော့မည်ဖြစ်ကြောင်း လက်ရှိကမ္ဘာ့အခြေအနေများက ဖော်ပြနေသည်။ ယင်းကို ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့သိရသနည်း။ “ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော် တည်လုနီး” ပြီဖြစ်ကြောင်း မှတ်သားဖော်ပြမည့် အဖြစ်အပျက်များစွာပါဝင်သည့် နိမိတ်ကို လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းနှစ်ထောင်တွင် ယေရှုဖော်ပြခဲ့သည်။ (လုကာ ၂၁:၃၁) ရှေ့ဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြသည့်အတိုင်း ထိုနိမိတ်မှအဖြစ်အပျက်များကို ကမ္ဘာပေါ်တွင် ယနေ့ အထင်အရှားတွေ့မြင်နေရသည်။
ပြီးနောက် အဘယ်အရာဖြစ်ပျက်လာမည်နည်း။ ယေရှု ဤသို့ဖြေဆိုသည်– ‘ကမ္ဘာဦးမှစ၍မဖြစ်စဖူး၊ နောက်၌လည်းမဖြစ်လတ္တံ့သော ကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းသည် ထိုကာလ၌ဖြစ်လိမ့်မည်။’ (မဿဲ ၂၄:၂၁) ယင်းသည် လူတို့ဖြစ်ပေါ်စေမည့် ဆင်းရဲဒုက္ခမဟုတ်ပေ။ ယင်းအစား “မြေကြီးကိုဖျက်ဆီးသောသူတို့ကို ဖျက်ဆီး” ရန် ဘုရားသခင်အရေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်၏။ (ဗျာ. ၁၁:၁၈) မိမိတို့၏ကိုယ်ကျိုးရှာလုပ်ရပ်များဖြင့် ကမ္ဘာဂြိုဟ်ကို ပျက်စီးလုနီးပါးဖြစ်စေခဲ့သော ဆိုးယုတ်သူတို့သည် ‘မြေကြီးပေါ်မှ ပယ်ရှားခြင်း . . . ကို ခံရကြလိမ့်မည်။’ သို့သော် ဘုရားသခင်နှစ်သက်လက်ခံသောနည်းဖြင့် ကိုယ်တော်ကိုဝတ်ပြုကိုးကွယ်နေသည့် အပြစ်ကင်းသူတို့မူကား “ကျန်ကြွင်းကြရလိမ့်မည်။”—သု. ၂:၂၁၊ ၂၂၊ သမ္မာ။
ယေဟောဝါဘုရားသခင် ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ တရားမျှတပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဤဥပမာကို သုံးသပ်ကြည့်ပါ– သင်သည် တိုက်ခန်းငယ်တစ်ခန်းကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုပါစို့။ အိမ်ငှားအချို့သည် ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်ပြီး ထောက်ထားစာနာတတ်သည်၊ အိမ်လခမှန်မှန်ပေးပြီး အိမ်ကိုလည်း ကောင်းစွာဂရုစိုက်ကြသည်။ သို့သော် အခြားအိမ်ငှားများမူကား စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့နိုင်ပြီး ကိုယ့်တစ်ဖို့သာကြည့်သူများဖြစ်သည်၊ အိမ်ငှားခလည်းမပေးသည့်အပြင် အိမ်ကိုလည်း ဖျက်ဆီးထားကြသည်။ အကြိမ်ကြိမ်သတိပေးသည့်တိုင် ထိုသို့ဆက်ပြုမူနေသည်။ သင် အဘယ်အရာပြုမည်နည်း။ ထိုအိမ်ငှားများကို နှင်ချမည်မှာ သေချာသည်။
အလားတူ၊ ယေဟောဝါဘုရားသခင်သည် ကမ္ဘာနှင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအရာအားလုံး၏ ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်သောကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်တွင် မည်သူတို့အား နေထိုင်ခွင့်ပြုမည်ကို ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။ (ဗျာ. ၄:၁၁) ယေဟောဝါ၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ မိမိအလိုတော်ကိုလျစ်လျူရှုပြီး အခြားသူတို့၏အခွင့်အရေးများကို ထိပါးနေသည့် ဆိုးယုတ်သူတို့အား ဤကမ္ဘာပေါ်မှ ဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။—ဆာလံ ၃၇:၉-၁၁။
မကြာမီ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ကမ္ဘာကို အုပ်ချုပ်တော့မည်။ ထိုအသစ်သောအစပြုမှုအား “အလုံးစုံသောအရာတို့ကို အသစ်ပြုပြင်သောကာလ” ဟုယေရှုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ (မဿဲ ၁၉:၂၈) ထိုအချိန်တွင် အခြေအနေများ မည်သို့ရှိမည်နည်း။ အောက်ပါကျမ်းစာကတိတော်များကို သတိပြုကြည့်ပါ–
ဆာလံ ၄၆:၉။ “မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင် စစ်မှုကိုငြိမ်းစေတော်မူ၏။”
ဟေရှာယ ၃၅:၁။ “တောနှင့်လွင်ပြင်သည် ဝမ်းမြောက်လိမ့်မည်။ ဆိတ်ညံသောအရပ်သည်လည်း ရွှင်လန်း၍ နှင်းပွင့်ကဲ့သို့ အပွင့်ပွင့်လိမ့်မည်။”
ဟေရှာယ ၆၅:၂၁-၂၃။ “ငါ၏လူတို့ . . . သည် ကိုယ်ပြုစုသောအရာကို ကြာမြင့်စွာသုံးဆောင်ရကြလိမ့်မည်။ ငါရွေးကောက်သောသူတို့သည် အချည်းနှီးမလုပ်မဆောင်ရကြ။ အသက်တိုသောသားကို မဖွားမမြင်ရကြ။”
ယောဟန် ၅:၂၈၊ ၂၉။ “သင်္ချိုင်းများမှာရှိသောသူအပေါင်းတို့သည် [ယေရှု] ၏စကားသံကိုကြား၍ ထွက်ရမည့်အချိန်ကာလရောက်လတ္တံ့။”
ဗျာ. ၂၁:၄။ “ဘုရားသခင်သည် သူတို့၏မျက်စိ၌မျက်ရည်ရှိသမျှတို့ကို သုတ်တော်မူမည်။ နောက်တစ်ဖန် သေဘေးမရှိရ။ စိတ်မသာညည်းတွားခြင်း၊ အော်ဟစ်ခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်းလည်းမရှိရ။”
ကျမ်းစာကတိတော်များကို သင် ယုံကြည်ပါသလော။ လူများစွာမှာ ယုံကြည်လိမ့်မည်မဟုတ်ဟု ကျမ်းစာတွင်ကြိုဟောထားသည်။ ထိုတွင်ဤသို့ဆို၏– “နောက်ဆုံးသောကာလ၌ ပြက်ရယ်ပြုတတ်သောသူတို့သည် မိမိတို့တပ်မက်ခြင်းအတိုင်းကျင့်နေ၍ ‘သခင်ဘုရားကြွလာမည်ဟူသော ကတိတော်သည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။ ဘိုးဘေးများအိပ်ပျော်သည်နောက် ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် ဖန်ဆင်းစကဖြစ်သကဲ့သို့ ဖြစ်မြဲဖြစ်ကြ၏’ ဟုဆို . . . ကြလိမ့်မည်။” (၂ ပေတရု ၃:၃၊ ၄) သို့သော် ထိုသို့ပြက်ရယ်ပြုသူများ အမှားကြီးမှားကြပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာမိန့်ဆိုရာကို ယုံကြည်သင့်သည့် အကြောင်းရင်းလေးခုကိုသာ သုံးသပ်ကြည့်ပါ–
(၁) ဘုရားသခင်သည် ရှေးအချိန်တွင် ဆိုးယုတ်သူများကို အရေးယူခဲ့၏။ နောဧခေတ် ရေလွှမ်းမိုးဘေးသည် ထင်ရှားသောသာဓကတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။—၂ ပေတရု ၃:၅-၇။
(၂) လက်ရှိကမ္ဘာ့အခြေအနေများအကြောင်းကို သမ္မာကျမ်းစာတွင် တိတိကျကျကြိုဟောထားသည်။
(၃) အရာခပ်သိမ်းသည် “ဖန်ဆင်းစကဖြစ်သကဲ့သို့ ဖြစ်မြဲဖြစ်” နေသည် မဟုတ်ပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်သည် လူမှုရေး၊ ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့် ဝန်းကျင်စနစ်တို့တွင် တစ်ခါမျှမကြုံဖူးသောအတိုင်းအတာဖြင့် ပျက်စီးယိုယွင်းလာနေသည်။
(၄) ယခု၊ ဘုရားသခင့် “နိုင်ငံတော်နှင့်ယှဉ်သောဧဝံဂေလိတရားကို” ကမ္ဘာချီဟောပြောနေရာ မကြာမီ “အဆုံး” ရောက်တော့မည်ကို အချက်ပြနေသည်။—မဿဲ ၂၄:၁၄။
ယေဟောဝါသက်သေများသည် သင့်အား သူတို့နှင့်အတူ ဘုရားသခင့်နှုတ်မြွက်တော် သမ္မာကျမ်းစာကိုလေ့လာရန် ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ သို့ဖြင့် သင်သည် ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တွင်ရရှိမည့် ထာဝရအသက်မျှော်လင့်ချက်အကြောင်း ပို၍သင်ယူနိုင်ပါလိမ့်မည်။ (ယောဟန် ၁၇:၃) မှန်ပါသည်၊ လူသားတို့အား အထူးကောင်းမွန်လှပသောအနာဂတ် စောင့်ကြိုနေပါသည်။ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးအချိန် ရောက်လာပါတော့မည်။ ထိုအနာဂတ်တွင် သင်ရှိနေမည်လော။
[စာမျက်နှာ ၇ ပါ အကြောင်းအရာအကျဉ်း]
အခြေအနေများသည် ယခင်ကအတိုင်း ဖြစ်မြဲဖြစ်နေမည်ဟု ဆိုကြသူတို့သည် အမှားကြီးမှားကြ
[စာမျက်နှာ ၈ ပါ ရုပ်ပုံ]
ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ သက်တမ်း ကုန်ဆုံးနေပြီလော
‘ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့် ငါတို့ကိုကွာစေနိုင်’ သည့်အရာ ရှိသလော။
မိသားစုပျော်ရွှင်မှုအတွက် သော့ချက်များ မြီးကောင်ပေါက်များနှင့် ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်း
ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ကြောင်း အဘယ်ကြောင့် ဖော်ပြရမည်နည်း
ယေဟောဝါ ဟူသော နာမတော်ကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် အသုံးပြုသင့်သလော
ကလေးတွေကို သင်ပေးပါ မှန်ရာကို ရှမွေလ ဆက်လုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်
ကျမ်းစာသည် ဘဝအသက်တာများကို ပြောင်းလဲစေ
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ ကင်းမျှော်စင် သြဂုတ် ၂၀၀၈
ကင်းမျှော်စင် သြဂုတ် ၂၀၀၈